Rakhiye BB Bacriminta Mashiinka Mashiinnada iyo Warshad | YiZheng
Mashiinka Mashiinka Bacriminta BB waxaa loo isticmaalaa in si buuxda loo walaaqo loona sifeeyo walxaha cayriin habka wax soo saarka ee isku darka bacriminta. Qalabku waa mid ugub ku ah naqshadeynta, isku-darka otomaatiga ah iyo baakadaha, xitaa isku darka, oo leh karti firfircoon.
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Badeecada BB?
BB Mashiinka Mashiinka Bacriminta waa qalabka lagu daro nidaamka qaadista quudinta, biraha birta ayaa kor iyo hoos u kaca si ay u quudiyaan alaabada, oo si toos ah ugu sii daaya qasiyaha, iyo bacriminta isku-darka bacriminta iyada oo loo marayo farsamooyin gaar ah oo gudaha ah iyo qaab saddex-geesood ah oo u gaar ah isku-darka maaddada iyo soo saarkeeda. Markaad shaqeyneyso, qalabka iskudhafka wareega isku wareejinta, qalabka soo saarida wareegyada iskudhafka ah, bacriminta waxay kusii jirtaa qashinka qashinka in cabbaar ah, ka dibna si toos ah ayey hoos ugu dhacdaa irridda.
Mashiinka bacriminta BB ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Maxaa loo adeegsadaa Mashiinka Bacriminta BB?
BB Mashiinka Mashiinka Bacriminta wuxuu ka adkaadaa isku-darka isku-darka 'chromatography' iyo is-dhaafsiga dhacdooyinka ay sababaan saamiga kala duwan ee alaabta ceeriin iyo cabbirka walxaha, sidaas darteedna ay u hagaajiso saxnaanta qiyaasta daawada. Waxay sidoo kale xallisaa saameynta nidaamka ay keeneen sifooyinka maaddada, gariirka farsamada, cadaadiska hawada, isbeddelka danab cimilada qabow iwm. Waxay leedahay astaamaha saxnaanta sare, xawaaraha sare, nolosha dheer, iwm, taas oo ah doorashada ugu habboon ee bacriminta BB ( isku dhafan) soo saare.
Codsiga Mashiinka Bacriminta BB
Ku BB Mashiinka Mashiinka Bacriminta inta badan loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah, bacriminta isku dhafka ah iyo hoosta ururiya boodhka warshad koronto, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa kiimikada, macdanta, qalabka dhismaha iyo warshadaha kale.
Faa'iidooyinka Mashiinka Bacriminta BB
(1) Qalabku wuxuu daboolayaa aag yar (25 ~ 50 mitir laba jibbaaran) wuxuuna leeyahay awood koronto oo hooseysa (awoodda qalabka oo dhan wuxuu ka yar yahay 10 kiilowaat saacaddiiba).
(2) Mashiinka ugu weyn wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo birta warshadaha ah, nidaamka xakamaynta ayaa ku habboon xaaladaha kala duwan ee shaqada adag.
(3) Qaado laba-marxalad ilaalinta dhul gariirka iyo tikniyoolajiyadda shaandhaynta heerarka badan, cabir sax ah.
(4) Isku-darka dharka, baakadaha wanaagsan, kala-sooc la'aanta qalabka ku jira geedi socodka baakadka, sixitaanka aan kala sooca lahayn ee isku-darka 10-60kg, ka adkaanta kala-soocidda maaddooyinka waaweyn ee habka wax soo saarka iyo baakadaha.
(5) Dhaqdhaqaaqayaashu waxay kobcinayaan wadnaha pneumatic, feed laba heer ah oo cabir ah, cabbiraad madaxbanaan iyo cabirka isugeynta qalabka kala duwan.
Muuqaalka Muuqaalka Mashiinka Bacriminta BB
Xulka Mashiinka Mashiinka Bacriminta BB
Mashiinka bacriminta BB wuxuu leeyahay qeexitaanno kala duwan, oo leh wax soo saar saacaddiiba ah 7-9T, 10-14T, 15-18T, 20-24T, 25-30T, iwm; iyada oo loo eegayo qalabka isku dhafan, waxaa jira 2 ilaa 8 nooc oo qalab ah.
＜ 85% (dhaxan la'aan)
Hore: Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Xiga: Mashiinka Bacriminta Joogtada ah
Hordhac Waa maxay Taangiga Halsaneyaha Horizontal? Wasakhda Qashin-qubka & Digo Muugid Isku-darka Haanta ayaa inta badan fulisa kuleylka aerobic-ka ee xoolaha iyo digada digaagga, qashinka jikada, qashin-qubka iyo qashinka kale iyada oo la adeegsanayo waxqabadka shey-baareyaasha si loo gaaro daaweynta isku-darka dhoobada oo waxyeelo leh ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Burburiyey Bacriminta Labada-Heer? Mashiinka Burburiya Labada Marxaladood waa mashiin nooc cusub ah oo si fudud u burburin kara dhuxusha aadka u badan ee qoyan, shale, cinder iyo qalab kale ka dib baadhitaan muddo dheer socday iyo nashqadeyn taxaddar leh oo ay sameeyeen dhammaan qaybaha bulshada. Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay jajabinta saaxiibkiisa ceyriinka ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Xashiishada ee Shisheeyaha Gawaarida ah? Xuddunta Bacriminta Chain Vertical Chain waa mid ka mid ah qalabka burburka ugu badan ee loo isticmaalo warshadaha bacriminta xarunta. Waxay leedahay waafajin adag oo loogu talagalay maadada leh biyo badan waxayna si habsami leh u quudin kartaa iyada oo aan la xannibin. Waxyaabaha ka soo gala f ...
Hordhac Waa maxay Mashiinka Daaweynta Wareegtada Bacriminta Granular? Mashiinka Daaweynta Mashiinka Daaweynta Mashiinka Daboolaha ee 'Organic & Compound Granular Fertilizer Rotary Coating Machine' waxaa si gaar ah loogu qaabeeyey qaab dhismeedka gudaha iyadoo loo eegayo shuruudaha nidaamka. Waa bacrimin wax ku ool ah qalabka wax lagu daboolo ee gaarka ah. Isticmaalka tikniyoolajiyadda dahaadhku waxay waxtar yeelan kartaa ...